सन् २०२० मा भन्दा यसवर्ष विश्वमा कोभिडबाट धेरैको मृत्यु « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 11 June, 2021 10:11 pm
एजेन्सी । सन् २०२० को अर्थात् गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष विश्वमा कोभिडबाट धेरैको मृत्यु भएको पाइएको छ । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरबाट कोभिड १९ को भाइरस देखा परेको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मा यो भाइरस विश्वभर पुगेको थियो ।
तर गत वर्षको भन्दा पनि यस वर्ष यो भाइरसबाट विश्वमा धेरै नागरिकको ज्यान गएको पाइएको एक समाचारमा जनाइएको छ । अमेरिकाको वाल स्ट्रिट जर्नलले यो समाचार दिएको हो । अघिल्लो वर्षको भन्दा यस वर्षको छ महिनायता नै विश्वमा कोभिडबाट धेरै मानिसको ज्यान गएको छ ।
बाइडन र पुटिनको जेनेभामा भेट, वार्ता सकारात्मक
एजेन्सी । अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिले जेनेभामा भएको वार्ता सकारात्मक रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा कोरोनाबाट अत्यन्त प्रभावित केही देश र विवरण
एजेन्सी । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा सङ्क्रमितको संख्या सत्र करोड ६७ लाख
भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या दिनप्रति दिन घट्दो
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक संक्रमित भएकाहरुको संख्यामा कमी हुँदै आएको छ । सरकारी
सशस्त्र प्रहरीलाई डा. शेर्पाले दिए स्टेचर
काठमाडौं । पर्वतीय उद्दार र उपचारमा क्रियाशील सोलुखुम्बुका डा. निमा नाम्गेल शेर्पाले सशस्त्र प्रहरीका लागि